နည်းပညာ | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဇူလိုင်လ 28, 2020 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
USB က wireless network ကိုကဒ်,anetwork card with built-in wireless WIFI chip and transmission via USB interface, connected to the computer USB interface, after the […]
DDR1, DDR2, DDR3 ကို, DDR4 အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
ဒီဇင်ဘာလ 31, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး 0
DDR = Double Data Rate ကိုနှစ်ချက်မှုနှုန်း synchronous dynamic random access memory ကို. တင်းကြပ်စွာ DDR စကားပြော DDR SDRAM ကိုခေါ်တော်မူရပါမည်, လူတွေတောင်းဆိုဖို့အသုံးပြုကြသည် […]
ငါသည်သင်တို့ကိုအလုပ်ရပ်တန့်ဖို့ကွန်ယက် adapter ယာဉ်မောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းမေးခွန်းအချို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ထင်. ဤအခြေလှမ်းများပျောက်ဆုံးကြိုးမဲ့ adapter devices တွေကိုဖြေရှင်းလို့ရပါတယ် Follow […]
laptops အမြဲဘလူးတုသ်-အဆင်သင့်ထံသို့လာကြပြီမဟုတ်. Computers without built-in Bluetooth capabilities interact with Bluetooth wireless devices with the help ofasmall receiver that plugs […]
အပြည့်အဝဖျေါပွခကျြ၏ကွန်ပျူတာ Optical Drive ကိုစက်ထူးဆန်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပပါဝင်သည်
အရေးအပါဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ optical drive ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ (CD ကို, ဒီဗီဒီ, Blu-ray player) အဖြစ် drive ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုရလိမ့်မည်ဟု discs တွေကိုအမျိုးအစားများဖြစ်ပါသည် […]
စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ မိုဘိုင်းဖုန်း Software များ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Technology_Internet HD Graphics processor ​​ကို device ကိုမော်ဒယ် Intel က Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows ပရိုဆက်ဆာ HTC က Nokia က OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီပီယူ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ ဥပဒေရေးရာအနက်
Sony Ericsson က စီပီယူ 64-နည်းနည်းက Windows Software များ စမတ်ဖုန်းများ device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် HTC က Qualcomm မှ Samsung က Technology_Internet Intel က Server ကို processor ​​ကို Nokia က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာ OS ကို-STORE ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု Samsung ရဲ့ Galaxy မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က ပရိုဆက်ဆာ HD Graphics